Apple inovimbisa kumisa kuchera pasi uye kukurudzira zvigadzirwa zvekare | Ndinobva mac
Nyika izere nemakomba. Kwese kwatinotarisa, hazvina basa nenyika kana ruvara rwehurumende yayo, iye munhu ari maburi pasi achitsvaga zvekushandisa nawo ekugadzira zvigadzirwa zvatinoshandisa mazuva ese zvakadaro, kazhinji, mhedzisiro yakaipa, kunyanya yenzvimbo dzakakanganiswa munharaunda, inodarika mabhenefiti. Uye nekuda kwechikonzero ichi, Apple yakafunga kutora nhanho yayo mukudzivirira nharaunda nhanho imwezve
Isu tese tinoziva kuti Apple ine mukurumbira wekuve imwe yemakambani anonetsekana zvakanyanya nezve nharaunda uye izvozvi, semhedzisiro yekuburitswa kwekambani ichangoburwa Yekuremekedzwa Kwekuremekedzwa Report 2017, zvinotonyanya nekuti Apple yakatanga "kumisa kuchera pasi zvachose".
1 Apple inoti 'HAPANA' kumigodhi
2 Kudzorerazve ndiyo kiyi, asi maitiro acho haasi nyore
Apple inoti 'HAPANA' kumigodhi
Iyo Cupertino kambani ichangotora yakakosha kukwakuka kuenda kumberi nechinangwa chakasimba chekudzivirira nyika yatinogara uye nehupenyu hwevese vapenyu vanozvizadza. Kuchera idambudziko rakakomba renharaunda, kunyanya kana zvasvika kune zvimwe zvinhu zvinogona kuva chepfu kune hutano uye izvo zvinoshandiswa mukugadzira kweakawanda emagetsi zvigadzirwa atinoshandisa mazuva ese. Asi matambudziko akatorwa kubva kumigodhi haana kungogumira kune zvakatipoteredza, zvinokonzeresa kusaenzana kweupfumi nemagariro, kunyange kusvika pamamiriro ekushandisirwa vashandi, kushandiswa kwevana uye mamiriro ezvinhu anogona kuverengerwa sehuranda.
Vana vanobata cobalt mumugodhi muDemocratic Republic of Congo | MUFANANIDZO: Amnesty International
Kune izvi zvese, mu Zvemamiriro Ekuremekedza Chirevo 2017, Apple inoratidza kutenda kwayo kwakasimba kuti tekinoroji inofanirwa kuve yakachengeteka kune avo vanoishandisa, nepo vachibvuma, zvakare zvakare, iko kwechokwadi shanduko yemamiriro ekunze uye izvo izvo "Zviwanikwa zvepasi hazvigare nekusingaperi".
Kudzorerazve ndiyo kiyi, asi maitiro acho haasi nyore
Mhinduro, inonongedzwa nekambani, ndeyekutsvaga fomula inobudirira inobatanidza zvinhu izvi, ndosaka yakaratidza chinangwa chayo chakasimba che gadzira zvishandiso uchishandisa zvinhu zvakadzokorodzwa chete, iyo inosanganisira aluminium, mhangura, tini, uye zvakare tungsten.
Nekudaro, ichi chinangwa chine chipingamupinyi chakakomba munzira, uye ndeyekuti Apple haisati yaziva kugadzira zvishandiso zvine zana muzana zvakapetwa zvinhu, kunyange ichiti ivo vari kutoshanda pairi.
Lisa Jackson, mutevedzeri wemutungamiri wenharaunda, zvematongerwo enyika pamwe nehurongwa hwekudyidzana, akataura mukati hurukuro kuti isangano risinganzwisisike sezvo richikosha, kwete chete nekuti rinofungidzira kukurudzira kwekusimudzira ramangwana reindasitiri kune chakanangana nechinangwa, asi zvakare nekuti pazviitiko zvishoma kwazvo, kambani inoita ruzhinji pachena isina kumbove akawana nzira yauchazokwanisa kuzviita nayo.
Jackson akatsanangurawo mubvunzurudzo yakati, panguva ino, chidiki chete chezviri mukati meiyo iPhone zvinotangira kubva mukushandura zvinhu. Zvakadaro, chinangwa chekambani ndechekuti, mukufamba kwenguva, vanobatanidza zvigadzirwa zvemhando yepamusoro zvakagadziriswa kubva kune vanotengesa nezvakawanikwa kubva kuApple zvigadzirwa zvinodzoserwa nevatengi, uye nekudaro vanogadzira ese marudzi emidziyo. Kuwedzera kuremekedza nharaunda uye izvo zvichaita kuti zvive nyore kupedza mugodhi.
Kufamba kwechinangwa kwaApple kubva kumigodhi kuenda pakushandisa zvigadzirwa zvakagadziriswa zvakakosha zvakanyanya uye zvakanyanya kukosha. Munguva yakapfuura, kambani yakagamuchira kutsoropodzwa kwakasiyana-siyana uye zvichemo zvakabva mukushandiswa kwemigodhi, zvimwe zvacho zvakakomba seizvo zvakaitika gore rapfuura apo a kuongorora Amnesty International yakataura izvozvo Vatengesi vebheteri veApple vaishandisa cobalt yakacherwa mumigodhi uko kushandiswa kwevana chaiko.
Kupomerwa mhosva yekushandiswa zvisiri pamutemo kwemigodhi yemarata kwakaitikawo panguva dzakasiyana.
Ndinovimba Apple ichaenderera mberi nematanho akasimba uye anomhanyisa mune izvi, uye kuti mamwe mafemu kutenderera pasirese anotevedzera nzira imwecheteyo.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Ndinobva mac » apuro » Noticias » Apple inovimbisa kumisa kuchera pasi uye kukurudzira zvigadzirwa zvekare
Iwo mashanu akanakisa masevhisi ekugadzira tsamba yetsamba pane yako Mac